စိတ်ကူးငယ်ငယ် » Random of Nang Nyi
8 Responses to “စိတ်ကူးငယ်ငယ်”
Craton says:	December 28, 2008 at 3:09 pm	အဲ့လို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းရမယ့် ဘ၀မျိုးလိုချင်တယ်။း)စိတ်ကူးလေးတွေအရမ်းကောင်းတယ်။
Reply	ခေါင်ခေါင် says:	December 28, 2008 at 3:12 pm	ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ.. မယ်ညီရေ.. ငါမပြောတော့ဘူး….မင်းသိမှာပါ.. ..
အင်းထဲလာလည်မယ့် နေ့ကျရင်တော့ … တစ်ရက်လောက် နေပြီးမှ ပြန်ရမယ်.. တို့ ၂ ယောက်နဲ့ တူတူလည်တာပေါ့.. Reply	mirror says:	December 28, 2008 at 3:14 pm	ကောင်းလိုက်တဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေရယ်…။
Reply	ဖိုးဂျယ် says:	December 29, 2008 at 12:16 am	အမလေး ဒီအင်းသူမယ်ခါင်က တမျိုး ညီရေ ညီဖြစ်ချင်သလိုလေး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘ၀မျိုးလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ဖြစ်နိုင်အောင်လဲ ညီက ကြိုးစားနိုင်မှာပါ
Reply	အိပ်မက်ရှင် says:	December 29, 2008 at 8:28 am	အို …အရမ်းကို လှတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ပါကလား နန်းညီရေ …အဲလို လှပတဲ့စိတ်ကူးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ ညီမငယ်ကို အားကျမိပါရဲ့ …ဘ၀ဟာ ငြိမ်းချမ်းလွန်းပြီး … ရိုးရှင်းစွာနဲ့ လှပနေမှာ သေချာပါတယ်၊နောက် စိတ်လည်း အရမ်းချမ်းသာရမှာ …ဆုတောင်းပေးပါတယ် … အခုလို စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ မနက်ဖြန်မှာ အကောင်အထည်ပေါ် ရုပ်လုံးကြွလာပြီး သိပ်လှတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်လို ဖြစ်ပါစေဗျာ … ။
ps. TAG လေး ကို ရေးပေးပါ့မယ်၊ ဖိုးဂျယ်လည်း အကို့ကို TAG ထားသေးတယ်လေ … Reply	tututha says:	December 29, 2008 at 12:16 pm	ညီ စိတ်ကူးလေးက မိုက်တယ်ကွ။ ကျုပ်ုကတော့ တခါတည်း မြို့ပါ တည်လိုက်တယ် ဟီဟိ
Reply	Andy says:	December 29, 2008 at 2:07 pm	စိတ်ကူးတွေယဉ်လိုက်ကြတာ…ယဉ်လိုက်ကြတာ…ငါဖို့ကုန်ပြီ Reply	အိဖူး says:	January 11, 2009 at 11:07 am	ဟေ့ ငါလည်းလာလည်မယ်နော် .. အဲ့အချိန်ဆို ငါလည်းအားလုံးအဆင်ပြေနေလောက်ရောပေါ့ .. ငါ့စိတ်ကူးထဲကလူနဲ့လာလည်ရင်လည်း လာမှာပေါ့ .. သူမဟုတ်တဲ့လူလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ .. အားလုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့ တစ်နေ့ကျရင် မယ်ညီ့အိမ်လေးကိုလာလည်မှာပါ .. တူမလေးတစ်ယောက်လောက်တော့ လိုချင်တယ် .. ဟဲဟဲဟိ .. … တာဝန်ကျေပါတယ်